I-VideoHere: Hlanganisa ividiyo kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza | Martech Zone
NgoLwesibili, Januwari 19, 2010 Douglas Karr
Enye yezinkampani ezinomusa engisebenza nazo Ikhathalophu. Banomkhiqizo omangalisayo obizwa ngokuthi Ukukhanya kwangemuva kokuthi sizobamba amavidiyo ethu nge. Uhlelo luhlinzeka ngekhwalithi emangazayo yokusingathwa kwamavidiyo wakho aku-inthanethi, ikunikeze ubunikazi kulawo mavidiyo, futhi inengxenye exhumanisa ngempela evumela ukuthi ubeke izixhumanisi bukhoma kumugqa wesikhathi wevidiyo yakho. Kuhlanganiswe nevidiyo ethile enhle analytics, iphakethe eliqinile!
Abantu abakhulu baseCantaloupe sebethule manje I-VideoHere (chofoza uma ungakwazi ukubuka ividiyo):
I-VideoHere uhlelo lwevidiyo eku-inthanethi ongalushumeka kunoma uluphi uhlelo lokusebenza lwewebhu ngomsebenzi omncane kakhulu wokuthuthukisa, awekho ama-API, futhi alukho utshalomali le-IT Abasebenzisi bakho bayakwazi ukukhomba nokuchofoza ukuze ulayishe, wenze ngezifiso, futhi ushumeke amavidiyo ngaphakathi kwesixhumi esibonakalayo somsebenzisi. Kufana nokunikeza amaklayenti akho ipulatifomu yevidiyo eku-inthanethi ngaphakathi kohlelo lwakho lokusebenza.
IVideoHere nayo ingahle ilungiselelwe ukuthi isebenze ngqo ne-akhawunti yakho ye-Backlight - uhlelo olulula ngokumangazayo. Ngilungiselele ukuthi isetshenziswe ne-blog yami futhi kuthatha ukuchofoza inkinobho ukuyilayisha nokushumeka ividiyo kubhulogi yami manje…. akusekho ukukopisha nokunamathisela ikhodi e-clunky! Uma unohlelo lokuphathwa kokuqukethwe, ngincoma kakhulu ukuthi ubheke i-VideoHere njengenye indlela yokwenza intuthuko yakho.
Nasi isithombe-skrini sayo sisebenza kubhulogi yami (impela sengivele ngabhala i-plugin ukuyifaka kuyo!):
Tags: chofoza lapha ukuze ulandeIMassRelevanceukukhangisa kwendabukoIrejista ejwayelekileukuthumela imiyalezoKubhala
Ungazenza Kanjani Izinombolo: Izifundo ezivela ku-Twitter naku-Facebook